Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Daaweynta Jir-dhiska ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Baxnaaninta iyo Jimicsiga > Qalabka daaweynta jireed
Qalabka daaweynta jireed, oo loo soo gaabiyo Physiotherapy, waa aalad isku darka arrimaha jirka jirka si uu u fiicnaado. Waxay ku habboon tahay in lagu isticmaalo guryaha iyo xafiisyada.
Daawaynta Jimicsiga Qalabyada jireed ee caadiga ah waxaa ka mid ah "korontada, codka, iftiinka, magnetismka, biyaha, cadaadiska, iwm. ayaa weli aad waxtar ugu leh cudurrada qaarkood, sida hagaajinta wareegga dhiigga si loo hagaajiyo shaqada xubnaha bini'aadamka ama hagaajinta xaaladda unugyada deegaanka ee jirka ayaa aad waxtar u leh.
Daawaynta Jidhka Qalabka waxa loo isticmaalaa qalabka daawaynta jidheed malaha waa qalab ku daawayn. Natiijada tooska ah ee hyperthermia waa inay keento balaadhinta xididdada dhiigga unugyada maxalliga ah ee jidhka bini'aadamka, xoojinta socodka dhiigga, furto xididdada xididdada dhiigga, iyo kordhinta qulqulka dhiigga ee unugyada aadanaha. Waxtarka qalabka noocan oo kale ah wuxuu si toos ah ula xiriiraa hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka unugyada unugyada hoos yimaada xaaladda wareegga dhiigga ee hagaajinta. Markaa hagaajinta wareegga dhiigga waxay si toos ah ula xiriirtaa saameynta daaweynta. Aaladaha ugu caansan ee kuleylku waa hirar gaaban iyo mowjad ultra-gaaban, microwave iyo therapy infrared.
Qalabka Daweynta Laser-ka Caafimaadka
Medical Laser Therapeutic Apparatus, waxa loogu yeero therapy field magnetic, waxa loola jeedaa dabeecadda been-abuurka ah ee sayniska ee dawo kale oo ku lug leh fikrado ay ka mid yihiin "goobka magnetka", "magnetism", iwm. Tusaale ahaan, sheegashada xoogga magnetic ama goobta magnetic waxay leedahay saameyn togan. on jidhka bini'aadamka, isticmaali kartaa saamaynta magnetic si loo gaaro dayactirka jirka iyo maskaxda ama saamaynta daaweynta cudurka.
Qalabka Daawaynta Jirka ee Wareega Dhiiga
Wareegga Dhiiga Qalabka daawaynta jidhka, waxa loogu yeero therapy magnetic field therapy, waxa loola jeedaa dabeecada sayniska ee been abuurka ah ee daawada kale ee ku lug leh fikradaha sida "magnetic field", "magnetism", iwm. Tusaale ahaan, sheegashada xoogga magnetic ama goobta magnetic ayaa leh togan. saamaynta jidhka bini'aadamka, isticmaali kartaa saamaynta magnetic si loo gaaro dayactirka jirka iyo maskaxda ama saamaynta daaweynta cudurka.
Qalabka Daawaynta Jirka Daawaynta Laysarka Adag ee Sare
Qalabka daawaynta jireed ee xoogga sare ee daaweynta leysarka, waxa loogu yeero therapy magnetic field therapy, waxaa loola jeedaa dabeecadda sayniska been abuurka ah ee daawo kale oo ku lug leh fikradaha sida "magnetic field", "magnetism", iwm. Tusaale ahaan, sheeg xoog birlab ama magnetic field. waxay saameyn togan ku leedahay jirka bini'aadamka, waxay isticmaali kartaa saameynta magnetic si loo gaaro dayactirka jirka iyo maskaxda ama saameynta daaweynta cudurka.
Cutubka Wireless-ka Qalabka Duugista Jirka ee Daaweynta Jirka
Cutubka Wireless Wireless Body Duugista Qalabka Daawaynta Jirka, waxa loogu yeero therapy field magnetic, waxa loola jeedaa dabeecadda sayniska been abuurka ah ee daawo kale oo ku lug leh fikradaha sida "magnetic field", "magnetism", iwm. Tusaale ahaan, sheeg xoog birlab ah ama goobta magnetic waxay saameyn togan ku leedahay jirka bini'aadamka, waxay isticmaali kartaa saameynta magnetic si loo gaaro dayactirka jirka iyo maskaxda ama saameynta daaweynta cudurka.
Qalabka Daawaynta Jirka ee Qalab
Qalab Daawaynta Jirka ah ee loo yaqaan 'magnetic field therapy', waxaa loola jeedaa dabeecadda sayniska ee been abuurka ah ee daawada beddelka ah ee ku lug leh fikradaha sida "magnetic field", "magnetism", iwm. Tusaale ahaan, sheegashada xoogga magnetic ama goobta magnetic ayaa leh togan. saamaynta jidhka bini'aadamka, isticmaali kartaa saamaynta magnetic si loo gaaro dayactirka jirka iyo maskaxda ama saamaynta daaweynta cudurka.
Qalabka Jimicsiga, waxa loogu yeero therapy magnetic, waxaa loola jeedaa dabeecadda sayniska been abuurka ah ee dawo kale oo ku lug leh fikradaha sida "magnetic field", "magnetism", iwm. Tusaale ahaan, sheegashada xoogga magnetic ama goobta magnetic ayaa saameyn togan ku leh aadanaha. jirka, isticmaali kara saamaynta magnetic si loo gaaro dayactirka jirka iyo maskaxda ama saamaynta daaweynta cudurka.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka daaweynta jireed oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka daaweynta jireed soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka daaweynta jireed la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.